Tranon’ny CNAPS nianjera : Olona folo no maty, 6 naratra mafy
Mpanao trano 10 no indray maty tany Ampasikabo-Tolagnaro, omaly tolakandro.
Teo am-panaovana fototra ny trano vao hatsangana ho an’ny Cnaps izy ireo no nianjera ny rindrina iray mifanila tamin’ilay fototra ka nitarika ny loza. Olona enina hafa no naratra mafy vokatr’izany.
« Tokony ho tamin’ny 4 ora tolakandro no niseho ity loza ity. Olona efatra no maty teo no ho eo. Valo no nentina haingana tany amin’ny hopitaly, saingy tsy tana ihany koa ny ain’ny enina tamin’izy ireo avy eo », hoy ny loharanom-baovao avy amin’ny mpitandro ny filaminana any an-toerana. 56 ny isan’ireo mpanao trano nanao ity fototra ity, saingy ny 16 tamin’ireo no niasa omaly.
« Efa mandray an-tanana ny famotorana mikasika ity raharaha ity amin’izao fotoana izao ny mpitandro ny filaminana. Mbola karazana savaranonando ihany anefa izany. Aorian’ny fandevenana ireo maty vao hisy ny fihainoana ny havan’izy ireo tsirairay avy », hoy ihany ity loharanom-baovao ity.
Tsy fantatra aloha hatreto izay antony nampianjera ilay rindrina. Araka ny loharanom-baovao dia nanaraka ny fombafomba rehetra amin’ny fanaovan-trano ihany ity fanorenana vaovao ity. Efa mandray andraikitra manoloana ny zava-misy ihany koa ny sampan’ny orinasa Cnaps any an-toerana.